တရုတ်ပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်ရေးစက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Topsky
RXR-MC80BD ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောမီးသတ်နှင့်ကင်းထောက်စက်ရုပ်အားရေနံဓာတုဗေဒသန့်စင်ခြင်း၊ ရေနံနှင့်လောင်စာဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ခြင်းနှင့်အခြားဓာတုဗေဒထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာစသည်တို့တွင်မီးသတ်ဆေးကြောခြင်းနှင့်ကင်းထောက်ခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးလုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မစ်ရှင်၌ထိခိုက်သေဆုံးမှုလျှော့ချရန်။
1. ★ပေါက်ကွဲမှု - အထောက်အထားအသိအမှတ်ပြု; IP67 & IP68
2. ★ Track သည်းခံနိုင်သောမီးဒဏ်ခံနိုင်သည့်ရာဘာနှင့်သတ္တုနံရံများကိုအသုံးပြုသည်
3. ★ Auomatic ရေကုလားကာအအေးစနစ်
4. ★ဓာတ်ငွေ့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ parameters တွေကို detect လုပ်ဖို့, ပေါင်းစည်းဓာတ်ငွေ့ detect ပလက်ဖောင်း
5. ★အကြီးစားဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်သည် 100M အရှည် DN80 မီးပိုက်နှစ်ခုကိုရေနှင့်ပြည့်စေနိုင်သည်
၇။ လည်ပတ်ခြင်း၊ အစေးပြောင်းခြင်းနှင့်ပက်ဖြန်းခြင်းမျိုးစုံပြောင်းခြင်းအတွက်မော်နီတာအားအဝေးထိန်းခြင်းနှင့်ရေနှင့်အမြှုပ်များအကြားအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။
၈။ HD ပုံရိပ်စနစ်၊ အချိန်မှန်မော်နီတာ၊ အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်၊ [4G / 5G တင်ယူနိုင်သည်]
၉။ ★ Knotting ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်အလိုအလျောက်ကျဆင်းခြင်း
၁။ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ - မီးဘေး၊ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုကင်းထောက်၊ အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ကင်းထောက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်နေရာများတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကင်းထောက်၊ ★အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် - ကားကိုယ်ထည်အတွင်းပိုင်းအပူချိန်နှင့်ကွင်းဆင်းအပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်ကားနှင့်အပြင်ဘက်ရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်
2. ★ Image collection - စက်ရုပ်ကိုယ်ထည်နှင့်ရေသေနတ်တို့၏ရှေ့နှင့်နောက်လမ်းကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းနှင့်စက်ရုပ်ကိုယ်ထည်ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက် high-definition infrared ကင်မရာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ roll, နှင့် azimuth ထောင့်များ၊ အော်ပရေတာသည်စက်ရုပ်အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့်တန်ဖိုးကိုဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်သည့် terminal သို့ပြန်လာရန်ကြိုးစားနိုင်ပြီး၊ နောက်ထပ်မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်ရန်
3. ★အသံစုဆောင်းခြင်း - စက်ရုပ်သည်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဆိုက်၏အသံကိုအချိန်နှင့်အမျှစုဆောင်းနိုင်သည်။
4. ★ပတ်ဝန်းကျင်ဝယ်ယူ: လေထုထဲတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင့်ပေါ်ရှိဓာတ်ငွေ့ contentration detect လုပ်ဖို့ devices များ detecting ပေါင်းစပ်ဓာတ်ငွေ့။ (ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
5. ★အပူမျက်စိရှာဖွေခြင်း (optional): အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ်မှတဆင့်အပူအရင်းအမြစ်ကိုခြေရာခံနှင့်စောင့်ကြည့်။
6. ★အလိုအလျောက်ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထိန်းညှိခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်း။ ။ ပြန်လည်မောင်းနှင်ခြင်းကိုတားဆီးရန်စက်ရုပ်မောင်းနှင်သောမော်တာသည်သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုမောင်းနှင်မှုစနစ်မှထုတ်လုပ်သောစနစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ရေဖျန်းသောအခါဘက်ထရီကိုအားသွင်းပါ။
၇။ အလိုအလျောက်အတားအဆီးများကိုရှောင်ရှားခြင်း။ အကာအကွယ်အမြင့်မားဆုံးနှင့်အကွာအဝေးရှည်သောအတားအဆီးရှောင်ရှားခြင်းစနစ်။
၈။ အန္တရာယ်ရှိသောကုန်တင်များအတွက်အကွာအဝေးအဝေးပစ်ခတ်မှု။ အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကြောင့်အဝေးထိန်းအကွာအဝေးသည် ၁ ကီလိုမီတာကျော်လွန်သည်။ စက်ရုပ်သည်အချက်အလက်နှင့်ဗွီဒီယိုအတွက် dual channel transmission ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မီးသတ်သမားသည်စက်ရုပ်အားအကွာအဝေးမှမီးတိုင်သို့လည်ပတ်နိုင်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုံခြုံမှုကိုသေချာစေသည်။
၉။ ★စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများသယ်ဆောင်နိုင်သောကိုယ်တိုင်ကိုင်ဆောင်ထားသောဘောင်သည်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်နေရာ (ရေပိုက်၊ ဓာတ်ငွေ့မျက်နှာဖုံး၊ လေဖိအားအရှိန်မြင့်လေထုအသက်ရှူကိရိယာ၊ မီးသတ်အဝတ်အစား၊ ကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာများနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ) ။ ဆွဲနိုင်သည် - ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်သည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ ကဆွဲကြိုးကွင်းမှတဆင့်အတားအဆီးများကိုဆွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်
၁၀။ ★အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု - စက်ရုပ်တွင်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ (ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်)
၁၂။ အရေးပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ် (စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်) - စက်ရုပ်ထံအပ်နှံထားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနောက်တွဲယာဉ်သို့မဟုတ်စက်ရုပ်ထံအပ်နှံထားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်
အလေးချိန် 529kg လမ်းကြောင်း မြင့်မားသော TEMP ခုခံ Track
အရွယ်အစား 1305 * 800 * 1065mm ဆွဲဆောင် 3800N
မြန်နှုန်း 0-1.81m / s တောင်တက်နိုင်စွမ်း တည်ငြိမ်မှု Angle 40 °
အလုပ်ချိန် ၂-၆ နာရီ အချိန်အားသွင်းသည် ၆-၈ နာရီ
အတားအဆီးကူး 220mm အတိမ်အနက်ကို 500mm
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး IP68 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်မှု 1110M
ကောင်းကင်တမန်ရေမှုန်ရေမွှား MAX 120 ° အကွာအဝေး ရေ 80M / Foam 73.2M
ရေဝင်ပေါက်2* DN80 စီးဆင်းမှု 80L / S-80LPS / 4800LPM water80L / s ရေမြှုပ်
အလုပ်လုပ်ဖိအား ၀.၁.၂ （Mpa） မြင့်မားသောထောင့် အလျားလိုက် -90 ° ~ 90 °； လောင်ဂျီတွဒ်： -18 ° ~ 90 °
အတားအဆီးရှောင်ရှားခြင်း 2M မိမိကိုယ်ကိုအအေးခံခြင်း ရေကုလားကာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ထောက်လှမ်း PTZ Ascend မူရင်း 1065mm, တက် 1870mm အနီအောက်ရောင်ခြည် TEMP ထောက်လှမ်း Temp -50 ℃ ~ 350 ℃
အလေးချိန် ၆.၅ ကီလိုဂရမ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် Window 7
အရွယ်အစား （မီလီမီတာ） 410 * 310 * 70mm မျက်နှာပြင် ၁၀ လက်မ
CO2 CO H2s CH4 စိုထိုင်းဆ အပူချိန်
ရှေ့သို့ RXR-M80D မီးသတ်စက်ရုပ်
နောက်တစ်ခု: ZHS2478 အချိုးကျလုံခြုံသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ
RXR-Q100D မီးသည်အသိဉာဏ်ရှိသောရေအခိုးအငွေ့မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း ...
RXR-M 30D မီးသတ်အမှုန့်မီးသတ်ဆေးဘူး ...